people Nepal » राशिफल : मंसीर १ गते / नोभेम्बर १७ तारिख शुक्रबार राशिफल : मंसीर १ गते / नोभेम्बर १७ तारिख शुक्रबार – people Nepal
राशिफल : मंसीर १ गते / नोभेम्बर १७ तारिख शुक्रबार
श्री शाके १९३९ बि. स. २०७४ साल मार्गशीर्ष १ गते शुक्रवार इश्वी सन २०१७ नोभेम्बर १७ तारीख मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथी चन्द्रमा तुला राशिमा सूर्य दक्षीणायन हेमन्त ऋतु बाला चतुर्दशी ,मार्ग संक्रान्ति,शतबीज रोपण,विद्यार्थी दिवस –
व्यापार ब्यवसायका क्षेत्रमा सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा साधारण समस्या देखा पर्नेछ । मानसिक चन्चलताले सामान्य कार्यका निम्ति धेरै समय खर्चनु पर्ला । आफुभन्दा सानाको हितका लागी समय तथा पैसा खर्च गर्नु पर्नेछ । बोलि तथा खानपानको क्षेत्रमा विषेश सजग रहनु होला ।
प्रतिपक्षीहरू सबल रहलान । सामान्य खर्चको योग रहेको छ । तपाईको कार्यको आलोचना बढ्न सकनेछ । मानसिक तनाबको सामना गर्नु पर्ला । अरुको बिश्वासमा गरीएका कार्यहरुमा सामान्य झझट पैदा हुन सक्ला । अनायासै यात्राको सम्भाबना रहन सक्नेछ । मान्यजनको साथ सहयोगमा गरीएका कार्य भने सफल रहलान ।
सन्तानको स्वास्थमा समस्या देखा पर्ला । बौधिक ब्यक्तित्व सँगको भेटघाटले मन हर्सित तुल्याउला । बिद्या क्षेत्र भने अधुरो रहनेछ । पारीवारिक झोर झमेलाले सताउन सक्छ । अप्रिय खबरले मानसिक चिन्ता ब्यहोर्नु पर्ला । आम्दानि क्षेत्र भने मध्यम रहेको छ । आँट र शाहासको बृद्यि हुनेछ ।
सभा सम्मेलनमा सरीक हुने योग रहेको छ । पारीवारिक साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मद्दत पूग्नेछ । परीश्रम अनुरुप फल प्राप्ति नहुनाले मनमा खिन्नता बोध हुनसक्छ । मान्यजनको साथ सहयोग प्राप्त हुनाले मन प्रशन्न रहला । काम कार्यको क्षेत्रमा बिषेश ध्यान दिनु होला ।
प्रतिस्पदामा अब्वल रहने योग रहेको छ । सामान्य यात्रा हुनसक्ने सम्भाबना रहेको छ । मित्रजनको साथ सहयोग भरपुर रहनेछ । पराक्रममा बृद्यि हुनेछ । मानसिक चन्चलताले गर्दा कार्य सम्पादनमा सामान्य झन्झट ब्यहोर्नु पर्ला । ब्यापार ब्यवसायको क्षेत्र भने राम्रो रहेको छ ।
कुलकुटुम्बको साथसहयोग मिल्ने छ । खानपानको गडबढीले स्वास्थमा सामान्य बाधा आउन सक्छ । बोलिको कारण आफन्तजनहरु रुष्ट रहन सक्छन् सजग रहनु होला । दीर्घकालिन फाईदा मुलक काममा लगानि लगाउने राम्रो समय रहेको छ तर तत्कालिक आर्थिक अभाब झेल्नु पर्ला ।
आम्दनी बृद्वि हुने योग रहेको छ । मनमा सामन्य चिन्ता ले सताउने छ । साजेदारी काममा हात नहाले कै बेस रहने छ । शारिरिक आलस्यता ले सताउने छ । साधारण चोट पटक लाग्न सक्ने सम्भाबना रहेको छ । प्रेमी प्रेमीका बिच खट्पट रहन सक्छ । कार्य सम्पादनमा आटँको कमि रहला ।
तपाईले गरेको कामको फाईदा अरुले लिन सक्छन् । मित्रजनहरुको लागी साधारण खर्चहुन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । खराब संंगतको कारणले सामान्य झन्जट ब्यर्होनु पर्ला । ब्यापार ब्यवसायमा सामान्यतय हानि रहन सक्ने छ । मानसीक चिन्ता रहन सक्छ ।
आय आर्जनको लागी राम्रो समय रहेको छ । हरकोहिको पुर्ण बिश्वास नर्गनु होला धोका हुन सक्छ । बाणिमा मधुरता छाउनेछ । नयाँ कामको क्षेत्रमा लगानि नगरेकै बेश हुनेछ । मेहेनत र परीश्रम को कदर हुन सक्ने योग रहेको छ । मित्रजन को साथ सहयोय प्राप्त हुनेछ ।
कार्य सम्पादन गर्न बढी परीश्रम र समय ब्यतित हुन सक्छ । मान्यजनको साथ सहयोग प्राप्त हुनाले मन प्रशन्न रहला । पारीवारिक सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । कष्टकर यात्रा रहन सक्छ । शारिरिक आलस्यता ले सताउने छ । सभा समेलनमा सरीक हुने योग रहेको छ ।
पराक्रममा बृद्यि हुनेछ । दाजु भाई तथा मित्रजनको साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ । यात्राकारक दिन रहेकोछ । तपाईको मेहेनतको फल अनायासै अरुलाई मिल्ने छ । गरिरहेको काममा सामान्य झन्जट सहनु पर्ला । लगानिको क्षेत्रमा सजग रहनु पर्ने दिन रहेको छ ।
मनमा कुबिचारको भाब पैदा हुनेछ । चोट पटक तथा शारीरिक अस्वस्थाका कारण कार्य सम्पादनमा समस्या आउन सक्छ । मान्य जनको साथ सहयोग पुर्ण रुपमा प्राप्त नहुनाले मनमा खिन्नता बोध हुनेछ । माल सामान को क्षति ब्यहोर्नू पर्ला सजग रहनु होला । खानपानमा ध्यान दिनु होला ।